ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲလုပ်နေရင်း စင်ပေါ်မှာဟန်မဆောင်နိုင်စွာငိုခဲ့တဲ့ Lee Jong Suk 😢 – Trend.com.mm
ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲလုပ်နေရင်း စင်ပေါ်မှာဟန်မဆောင်နိုင်စွာငိုခဲ့တဲ့ Lee Jong Suk 😢
Posted on August 20, 2018 August 20, 2018 by Noel
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ မင်းသားချော Lee Jong Suk ဟာ မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်း သြဂုတ်လ ၁၇ရက်နေ့က ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲလုပ်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တစ်ချို့ကိုဖွင့်လှစ်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကိုချစ်တဲ့သူ၊ပရိသတ်တွေကလည်းချစ်ကြတဲ့ Lee Jong Suk ဟာ မကြာခင် စစ်မှုထမ်းဆောင်ရတော့မယ့်အကြောင်းနဲ့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့ခွဲရတော့မှာဖြစ်လို့မျက်ရည်တောင်ကျခဲ့ပါသတဲ့ 😪
"I can't see you guys like this next year, I won't ask you guys to wait for me. If there are people who are better than me." – Lee Jong Suk
Lee Jong Suk talking about his enlistment. 💔#CrankUp #LeeJongSukInMNL
credits to all the pic owner pic.twitter.com/TsU8zQ0u04
— LJS 💋 (@LeeJongSukFanss) August 18, 2018
Jong Suk က သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာဆိုရင်ဖြင့် သူကိုယ်တိုင်သာ မျက်ရည်ကျရုံမက ပရိသတ်တွေကိုပါမျက်ရည်ကျစေခဲ့တာပါ။သူပြောခဲ့တာကတော့ “ဒါက ဒီနေ့အတွက် ကျွန်တော်ပြင်ဆင်လာခဲ့တာ အားလုံးပါပဲ။ကျွန်တ်ာနှစ်တိုင်း ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံကပရိသတ်တွေဟာဆိုရင် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကိုပိုပြီး ကျွန်တော့်ကိုအားပေးလာကြတာပါ။အဲ့ဒီအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တေ်ာ့ကိုချစ်ပေးကြတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတာလည်း သိပါတယ်။နောက်နှစ်ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ခဏတော့တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော် အရမ်းဝမ်းနည်းလို့ ငိုမိမတက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ တစ်ခြားအနုပညာရှင်တွေလို ကျွန်တော့်ကိုစောင့်နေပေးကြမှာလားလို့ ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှမမေးချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ငိုချင်နေပေမဲ့ …ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်၊ဒီလိုမျိုး ကျွန်တော်ဟန်ဆောင်ပြောနေရလေ ပိုပြီးစိတ်ပင်ပန်းလေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ အခုစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့သွားရမှာက ခင်ဗျားတို့ကိုပြဖို့ နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်တွေးပါတယ်။ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုတွေပြီးဆုံးသွားတာနဲ့ ကျွန်တော်သွားရတော့မှာပါ။လုပ်နေကျမဟုတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရတာ ကျွန်တော့်အတွက် အရမ်းခက်ခဲပါတယ်(😢ငိုပြီးပြောခဲ့တာပါ)ကျွန်တော်နဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေတဲ့သရုပ်ဆောင်အလုပ်မှာတောင် ကျွန်တော်စိတ်မနှစ်နိုင်တော့ဘူး။တောင်းပန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ ကျွန်တော်ရအောင်ဆက်သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ”လို့ပြောရင်း ငိုနေခဲ့ပါတယ်။”ကျွန်တော် အခုဘာလို့ဒီလိုလုပ်နေရတာလဲ? ဘာလို့ငိုနေရတာလဲ?”ဆိုပြီးဆက်ပြောတဲ့အခါမှာတော့ ပရိသတ်တွေက မငိုပါနဲ့။အဆင်ပြေသွားမှာပါ။အဆင်ပြေပါတယ်လို့ဝိုင်းပြီးအားပေးခဲ့ကြပေမဲ့ “ကျွန်တော် တကယ်အဆင်မပြေပါဘူး။ကျွန်တော့်ကို ဒီနေ့လာတွေ့ဆုံအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။တကယ်လို့အခွင့်အရေးရှိခဲ့ဦးမယ်ဆိုရင် နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရအောင်။ဂရုစိုက်ကြပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”ဆိုပြီး မျက်ရည်တွေကျကာဝမ်းပန်းတနည်းပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 😪
အထူးသဖြင့် “နောက်နှစ်ဆိုရင် ဒီလိုမျိုးခင်ဗျားတို့နဲ့ကျွန်တော်မတွေ့နိုင်တော့ဘူး။ကျွန်တော့်ကို စောင့်နေပေးကြမှာလားလို့လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ ကျွန်တော်မေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော့်ထက်ပိုတော်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်”ဆိုတဲ့ဝမ်းနည်းစကားလေးက ပရိသတ်တွေကိုဝမ်းနည်းစေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ အင်စတာဂရမ်၊တွစ်တာတွေအောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေက သူဘာတွေပဲပြောပြော အမြဲစောင့်နေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကောမန့်တွေရေးသားကာ သူတို့ရဲ့အချစ်တွေကို ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
Lee Jong Suk ဟာ ၂၀၁၇ သြဂုတ်လမှာစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့စာရင်းရောက်ခဲ့ပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုလက်ခံထားတာတွေကြောင့် နောက်ဆုတ်ခဲ့ရတာပါ။နိုဝင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့မှာ မနီလာက ပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာ ၂နှစ်ကြာစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့သွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်ပြတ်နေမှာဖြစ်ကာ ဒီကြားထဲမှာသူ့ကိုမေ့သွားကြမှာလည်းစိုးရိမ်၊သူစစ်မှုထမ်းဆောင်ပြီးလို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းပရိသတ်တွေ သူ့ကိုအရင်လိုမချစ်တော့မှာစိုးရိမ်ကာ အခုလိုပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲမှာတောင်သူ့ခံစားချက်ကို မဖုံးကွယ်နိုင်ပဲ ငိုမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကပရိသတ်ကြီးရော သူ့ကိုမမေ့သွားပဲ စောင့်နေပေးကြမယ်မဟုတ်လား?
တောငျကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့နာမညျကြျောအနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈသူ မငျးသားခြော Lee Jong Suk ဟာ မကွာသေးခငျရကျပိုငျး သွဂုတျလ ၁ရရကျနကေ့ ဂပြနျနိုငျငံမှာ ပရိသတျတှဆေုံ့ပှဲလုပျခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ စိတျခံစားခကျြတဈခြို့ကိုဖှငျ့လှဈပွခဲ့ပါတယျ။
ပရိသတျတှကေိုခဈြတဲ့သူ၊ပရိသတျတှကေလညျးခဈြကွတဲ့ Lee Jong Suk ဟာ မကွာခငျ စဈမှုထမျးဆောငျရတော့မယျ့အကွောငျးနဲ့ပတျသကျပွီးပွောပွခဲ့တာဖွဈပွီး ပရိသတျတှနေဲ့ခှဲရတော့မှာဖွဈလို့မကျြရညျတောငျကခြဲ့ပါသတဲ့။
Jong Suk က သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှကေိုပွောခဲ့တဲ့စကားတှဟောဆိုရငျဖွငျ့ သူကိုယျတိုငျသာ မကျြရညျကရြုံမက ပရိသတျတှကေိုပါမကျြရညျကစြခေဲ့တာပါ။သူပွောခဲ့တာကတော့ “ဒါက ဒီနအေ့တှကျ ကြှနျတျောပွငျဆငျလာခဲ့တာ အားလုံးပါပဲ။ကြှနျတျာနှဈတိုငျး ပရိသတျတှဆေုံ့ပှဲကို ကငျြးပခဲ့ပါတယျ။
ဂပြနျနိုငျငံကပရိသတျတှဟောဆိုရငျ တဈနှဈထကျတဈနှဈကိုပိုပွီး ကြှနျတေျာ့ကိုအားပေးလာကွတာပါ။အဲ့ဒီအတှကျ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။ကြှနျတျော့ကိုခဈြပေးကွတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောခငျဗြားတို့ကိုပွနျပွီးတုံ့ပွနျရမယျဆိုတာလညျး သိပါတယျ။နောကျနှဈဆိုရငျတော့ ခငျဗြားတို့ ကြှနျတေျာ့မကျြနှာကို ခဏတော့တှရေ့မှာမဟုတျပါဘူး။ကြှနျတျော အရမျးဝမျးနညျးလို့ ငိုမိမတကျပါပဲ။ဒါပမေဲ့ တဈခွားအနုပညာရှငျတှလေို ကြှနျတေျာ့ကိုစောငျ့နပေေးကွမှာလားလို့ ကြှနျတျောဘယျသူ့ကိုမှမမေးခငျြပါဘူး။ကြှနျတျောအဆငျပွပေါတယျ။ငိုခငျြနပေမေဲ့ …ကြှနျတျောအဆငျပွပေါတယျ၊ဒီလိုမြိုး ကြှနျတျောဟနျဆောငျပွောနရေလေ ပိုပွီးစိတျပငျပနျးလပေါပဲ။ဒါပမေဲ့ အခုစဈမှုထမျးဆောငျဖို့သှားရမှာက ခငျဗြားတို့ကိုပွဖို့ နောကျထပျအလုပျတဈခုလို့ပဲကြှနျတျောတှေးပါတယျ။ပွီးတော့ ရုပျရှငျရိုကျကူးမှုတှပွေီးဆုံးသှားတာနဲ့ ကြှနျတျောသှားရတော့မှာပါ။လုပျနကေမြဟုတျတဲ့အလုပျတဈခုကို ရှေးခယျြရတာ ကြှနျတေျာ့အတှကျ အရမျးခကျခဲပါတယျ(😢ငိုပွီးပွောခဲ့တာပါ)ကြှနျတျောနဲ့အံဝငျခှငျကဖြွဈနတေဲ့သရုပျဆောငျအလုပျမှာတောငျ ကြှနျတျောစိတျမနှဈနိုငျတော့ဘူး။တောငျးပနျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ပရိသတျတှကေို ကြေးဇူးတငျတဲ့နှလုံးသားနဲ့ ကြှနျတျောရအောငျဆကျသရုပျဆောငျသှားမှာပါ”လို့ပွောရငျး ငိုနခေဲ့ပါတယျ။”ကြှနျတျော အခုဘာလို့ဒီလိုလုပျနရေတာလဲ? ဘာလို့ငိုနရေတာလဲ?”ဆိုပွီးဆကျပွောတဲ့အခါမှာတော့ ပရိသတျတှကေ မငိုပါနဲ့။အဆငျပွသှေားမှာပါ။အဆငျပွပေါတယျလို့ဝိုငျးပွီးအားပေးခဲ့ကွပမေဲ့ “ကြှနျတျော တကယျအဆငျမပွပေါဘူး။ကြှနျတေျာ့ကို ဒီနလေ့ာတှဆေုံ့အားပေးကွတဲ့အတှကျကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။တကယျလို့အခှငျ့အရေးရှိခဲ့ဦးမယျဆိုရငျ နောကျထပျတဈကွိမျကြှနျတျောတို့တှရေ့အောငျ။ဂရုစိုကျကွပါ။ကြေးဇူးတငျပါတယျ”ဆိုပွီး မကျြရညျတှကေကြာဝမျးပနျးတနညျးပွောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ 😪
အထူးသဖွငျ့ “နောကျနှဈဆိုရငျ ဒီလိုမြိုးခငျဗြားတို့နဲ့ကြှနျတျောမတှနေို့ငျတော့ဘူး။ကြှနျတေျာ့ကို စောငျ့နပေေးကွမှာလားလို့လညျး ဘယျသူ့ကိုမှ ကြှနျတျောမေးမှာမဟုတျပါဘူး။ကြှနျတေျာ့ထကျပိုတျောပွီး ပိုကောငျးတဲ့သူတှရှေိနပေါတယျ”ဆိုတဲ့ဝမျးနညျးစကားလေးက ပရိသတျတှကေိုဝမျးနညျးစခေဲ့ပါတယျ။သူ့ရဲ့ အငျစတာဂရမျ၊တှဈဈတာတှအေောကျမှာတော့ ပရိသတျတှကေ သူဘာတှပေဲပွောပွော အမွဲစောငျ့နမေယျဆိုတဲ့အကွောငျးကောမနျ့တှရေေးသားကာ သူတို့ရဲ့အခဈြတှကေို ဖျောပွခဲ့ကွပါတယျ။
Lee Jong Suk ဟာ ၂၀၁၇ သွဂုတျလမှာစဈမှုထမျးဆောငျဖို့စာရငျးရောကျခဲ့ပမေဲ့ ရုပျရှငျရိုကျကူးမှုလကျခံထားတာတှကွေောငျ့ နောကျဆုတျခဲ့ရတာပါ။နိုဝငျဘာလ ၁၈ရကျနမှေ့ာ မနီလာက ပရိသတျတှနေဲ့တှဆေုံ့ပှဲကငျြးပမှာဖွဈပွီး ဒီနှဈမကုနျခငျမှာ ၂နှဈကွာစဈမှုထမျးဆောငျဖို့သှားရတော့မှာဖွဈပါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှနေဲ့ အဆကျပွတျနမှောဖွဈကာ ဒီကွားထဲမှာသူ့ကိုမသှေ့ားကွမှာလညျးစိုးရိမျ၊သူစဈမှုထမျးဆောငျပွီးလို့ပွနျလာတဲ့အခါမှာလညျးပရိသတျတှေ သူ့ကိုအရငျလိုမခဈြတော့မှာစိုးရိမျကာ အခုလိုပရိသတျတှဆေုံ့ပှဲမှာတောငျသူ့ခံစားခကျြကို မဖုံးကှယျနိုငျပဲ ငိုမိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီကပရိသတျကွီးရော သူ့ကိုမမသှေ့ားပဲ စောငျ့နပေေးကွမယျမဟုတျလား?